Umthandazo kuSanta Cyprian. ? Ukukhuselwa, ukubopha, iTame kunye nokuLawula
Umthandazo kuSan Cipriano. Uyaziwa ngokuba namandla amaninzi ezulwini. Yenza Umthandazo kuSt ukhuseleko, ukubopha i-tame kunye nokulawula kunokusinceda kwiimeko ezininzi zobomi.
Ingakumbi kwiimeko apho sicinga ukuba asikho isisombululo. Ingcali ekusombululeni iingxaki zabatshati apho elinye lamaqela lithatha isigqibo sokushiya ibhedi ngenxa yaso nasiphi na isizathu.
Nangona kunjalo, amandla abo anokusinceda ukuba sizive sikhuselekile okanye siphumelele. I imithandazo bahlala benamandla kwaye xa ubeka kubo lonke ukholo lokuba unommangaliso awuthathi thuba lide ukusifikelela.
Ngoku, kuyimfihlo ukuba iyakusizisela izibonelelo ezongezelelweyo ngokwazi ukuba nguwuphi na umthandazo ekufuneka ubhekiswe kuwo.
Ngamnye usebenze ngakumbi okanye engaphantsi kancinci kuxhomekeka kwimeko sicela uncedo kuyo.
Kule meko iSan Cipriano inamandla kwaye inokusinceda kwiimeko apho sifuna ukuba silawule umntu othile okanye imeko ethile.
1 Iinjongo zomthandazo weSt
1.1 Umthandazo kuSt. Cyprian ukuba unditsalele umnxeba
1.2 Umthandazo kuSanta Cyprian wokhuselo
1.3 Umthandazo kuSanta Cyprian wokubopha, ukubopha kunye nokulawula
2 Ndingayithandaza yonke loo nto?
Iinjongo zomthandazo weSt
I-San Cipriano inceda abantu kuyo yonke into ebomini babo.
Ngalo lonke eli nqaku siza kubonisa izivakalisi ezi-4 ubuncinci ngeenjongo ezahlukeneyo.
Imithandazo iya kusebenza:
Bopha, lumise uthando;
Imali kunye nokuchuma.
Ngokusisiseko, le mithandazo iya kukhonza zonke iinkalo zobomi bakho, ukusuka kwimali ukuya kuthando.
Ukufumana iziphumo ezilungileyo kakhulu kufuneka uthandaze ngokholo kwaye uhlale ukholelwa kumandla eSt.
Umthandazo kuSt. Cyprian ukuba unditsalele umnxeba
Oyingcwele waseCyprian, osikelelekileyo phakathi kwabangcwele, ndiyakucela.
Yenza (...) uvakale ukuba uyandidinga, ukuba awukwazi kuma ukungabikho kwam kwaye unditsalele umnxeba. Yenza ifowuni yam ikhala kwaye ndisiva ilizwi le (...) kwelinye icala.
Saint Cyprian, umncedisi onamandla onke, ndinike lo mnqweno ulula, ndimamele ilizwi elithambileyo (...) Kwaye ube nakho ukuyiva, uyonwabele kwaye uyikhonze kwakhona. San Cipriano, ndikholwa (...) ukunditsalela umnxeba, naphi na apho ukhoyo nangoku.
Nditsalele umnxeba umnxeba kuba ufuna ukundimamela ndihleke okanye ndikhale ecaleni kwam.
Ntanda San Cripriano, ngobukhulu bakho ndiyabulela kwaye njengesicaka esithobekileyo ndiya kulusasaza uzuko lwakho naphi na apho ndiya khona.
Makube njalo. Kwaye kuya kuba njalo.
Lo mthandazo unokwenziwa kwiimeko ezininzi, nokuba wenza uxolelwaniso naloo mntu okanye uqalile ubudlelwane.
Kukuba ndicacisa ishishini ukuba esi sivakalisi siyasebenza.
Kubalulekile ukuba igama lomntu esifuna ukuba usitsalele umnxeba kunye neenjongo esifuna ukuba sizifowunelwe.
Ukuba asikacaci oko, kuya kufuneka kuqala sicwangcise ngoba umthandazo unamandla kakhulu kwaye kulungile ukuyenza xa yonke into icacile ukuze ungabuzi ngokungalunganga.
Ukukhanyisa amakhandlela okanye ukungawenzi ngexesha lo mthandazo usenziwa kuxhomekeke emntwini, into ekhuthazwayo kukuba uthatha ixesha lokugxila emthandazweni.
Asikwazi ukuthandaza xa ingqondo ikwenye into, kufuneka sijongise kwizicelo ezenziwayo ukuze sikwazi ukubuza into efunekayo.
Umthandazo oya eSt. ISyprian ukukhusela
Virtuosísimo San Cipriano, Bhishophu wase-Korinto, ndicela uthando lweNkosi yethu uYesu Krestu abathi lundikhulule ekuhlaselweni lutshaba olubi, ungamcaphukisi.
Ndisindise ekufeni ngesiquphe, izaqhwithi, imibane, imililo, nabamelwane abangenabuchule. Ukuba ndiyawa entolongweni, ndithuthuzele, undincede ndiphume kuwo ngembeko, intloko yam iphakame.
Kubantu abanomona nabanenkohliso, ndisuse.
Kwaye izambatho zakho zindigubungela kubo bonke ubungozi obukhoyo phambi kwam, kuba ngokucela kwakho ndicela ngokuzithoba uBathathu Emnye, uThixo uYise, uThixo uNyana, noMoya oyiNgcwele.
Le yeyona nto ixhalabisa rhoqo emntwini, nokuba yeyenzelwe Cela ukhuseleko kuthi okanye ilungu losapho, I-San Cipriano yeyona Ngcwele inokusinika esi sicelo.
Umkhuseli onamandla kuzo zonke iimeko.
Umthandazo weSanta Cyprian wokhuselo kufuneka wenziwe kuqala uqaphela amandla e-Saint Cyprian ukuze usikhusele, emva koko ukhuseleko kufuneka lucaciswe ngokuthe gca njengoko kunokwenzeka, ngaphandle kokuphambuka okuninzi.
Ngoku, kwinyathelo lokugqibela, enkosi sinikezelwa ngommangaliso wokhuseleko njengomqondiso wokholo. Ngale ndlela sitywina umthandazo onamandla wokufumana ukhuseleko ngamaxesha onke.
Umthandazo kuSanta Cyprian wokubopha, ukubopha kunye nokulawula
“Amandla akho amakhulu, owu, iSostrian enkulu enkulu, umpostile wabo babandezeleka ngenxa yothando, ngamana amandla akho angenakuthelekiswa nanto angenza kum, endikulangazelelayo namhlanje.
Yenza egameni lokuzinikela kwam kwigama lakho, oh! Ingcwele yam engummangaliso kunye nabasweleyo, leyo (yatsho igama lomntu ufuna) ijikela kum, emzimbeni nasemphefumlweni kwaye akukho mntu ungowakhe ngaphezu kwakhe.
Ukuthi uyandidinga kwaye undibona ngamehlo am kwaye undijonge naphi na nangona esazi ukuba akekho, ukuba uyandilangazelela, kuba usoloko ecaleni kwam kwaye uzibambe ngethemba lokuba ebhedini yam, etafileni yam kunye amaphupha am
Yho, mpostile unamandla, ubungumgqwirha kwimimangaliso yakho kwaye ungcwele ngobungcwele bakho, ungandilahli ngoku!
Ndifuna ukuKhanya kwakho, ukukhanya okungathethekiyo, ukukhanya okungummangaliso, ukuqhuba loo nto iphambeneyo indidlayo ndinethemba lokuphila ngonaphakade kanaphakade.
Makasondele namhlanje azondinika ubukhoboka bakhe kwiimvakalelo ezithembekileyo kunye nemiphefumlo emnandi kunye nesisa, oh! Nkosi ukuba uve yonke into, ungandishiyi kwesi sihlandlo sobuhlungu bokuziva ungancedi / okanye ngaphandle kothando lwakhe nangaphandle kobushushu bakhe.
Oko kuza kumaphupha am kunye nenyani yam ngezithembiso zokuzifezekisa kunye neminqweno endiya kuyenza ukuba izaliseke. Saint Cyprian, ndimamele, xa kushushu lomthandazo, isibongozo sam sihamba!
Ndizise kulonto ndiyithandayo, ngoku yizise kum kuba ndiyatyhafa ngaphandle kobukho bakhe, nceda, sintlo esingummangaliso ... mamela umthandazo wam, kunye neqabane lakho likaJustina kunye nomntu obhinqileyo, ozokuhamba nomsebenzi wakho ococekileyo kubo bonke abo siyabuza ...
Owu uzuko, ndimamele!… Amen.
Ukufumana ezi mpembelelo zontathu emntwini kuphantse kwangumba ongummangaliso.
Yiyo loo nto kukho umthandazo okhethekileyo ukuyiphumeza ngokufanelekileyo nangokugqibela.
Ngoku kuya kufuneka uzazi iinjongo zakho, ugcine umntu ecaleni kwakho amandla okanye ukumenza ukuba enze le nto siyifunayo ayisiyiyo eyona nto ilungileyo kwimpilo yexesha elide yesi sibini.
Nangona kunjalo, le mithandazo inamandla kangangokuba kufuneka siyenze ngokunyaniseka.
Ilungile bopha, ulawule kwaye ulawule Indoda, isoka okanye ukuqhelana. Isebenza nabani na.
Othandekayo nothandekayo uSaint Cyprian, ndiqinisekile ngokulunga kwakho kunye nokuzimisela kwakho Ubulungisa kunye nenkosi yethu.
Ukusuka kwimbonakalo embi, kwintlekele, ndihlangule. Ndiphe intsikelelo yakho kwaye ndiphucule imeko yam. Andikuceli nge-lottery, okanye imali ngokukhawuleza yokufika ngosuku.
Umsebenzi ofanelekileyo wokufumana imali kusapho lwam wanele.
O wena Cyprian oNgcwele, kunye nesi sicelo sokuthobeka ndiyathemba ukufumana intsikelelo yakho yokutshintsha ikamva lam kunye nelam.
Kwilizwe elihlala lisengozini, imali iba ngummangaliso ukuba ube nayo kwaye uyilahle ngokuthanda kwayo.
Kungenxa yoko le nto kufuneka sithandaze kwimali yokucela imali kuSt.
Ukucela imali ukuba ihlale iqukuqela ezandleni zethu lukhetho oluhle lokuqinisekisa impumelelo kuwo onke amashishini esiwenzayo.
Thandaza kwaye ubuze iSan Cipriano ngommangaliso wemali kunye nomsebenzi ukuze ummangaliso ufike ngokukhawuleza, khumbula ukuba akupheleli ukuthandaza kodwa nokwenza oko kunokwenzeka ukuze sifezekise oko sikufunayo.
Ndingayithandaza yonke loo nto?
Inyani yile yokuba abantu abaninzi bafuna uncedo ngezinto ezahlukeneyo kubomi babo. Xa oku kusenzeka, zonke izivakalisi ezikweli nqaku kufuneka zithandaze.
Unokuthandaza nonke, kodwa hayi ngosuku olunye. Sicebisa ukuba ushiye usuku olu-1 lokuphumla phakathi komthandazo ngamnye.
Kubalulekile ukuba ungathandazi nakwingcwele eyahlukileyo izinto ezahlukeneyo ngosuku olunye, kungenjalo angangayi nakwezinye izicelo.
Ke ngoko thandaza umthandazo weSt. Cyprian, ukubopha, ukubamba, ukulawula kunye nokukhuseleka kwiintsuku ezahlukeneyo.